MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA EE LOO YAQAAN 'RED-TIGER BULLDOG DOG' - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha ee loo yaqaan 'Red-Tiger Bulldog Dog'
Adult Red-Tiger Bulldog, Lahaanshaha Scott L. Amos, Sr.
casaan tahy-ger BUHL-dawg
Madaxa Red-Tiger Bulldog waa inuu u muuqdaa mid ballaadhan, fidsan dusha sare iyo dherer dhexdhexaad ah oo leh muruqyo dhabanno iyo joogsi gooni ah. Madaxa ayaa umuuqda in la jarjaray isagoo muujinaya awooda weyn, xarrago Bulldog xarrago iyo dabeecad, Madaxa RTB waa inuu siiyaa aragti ah awood aad u weyn, laakiin waa inuusan u dhigmin cabirka guud iyo xaqiijinta jirka.
Afka waa inuu ahaadaa mid ballaaran oo leh sanka ballaaran ee furan oo dhererkiisu dhexdhexaad yahay qiyaastii 2.5 '-3.5' Xuubka waa inuu ka weynaadaa salka oo leh taabasho dhexdhexaad ah ama yar oo xagga sanka ah. Dibnaha waa inay ka buuxsamaan midab casaan ama casaan guduudan oo casaan qafiif ah la ogol yahay laakiin aan la doorbidin. Garka si wanaagsan ayaa loo qeexay waana inuu noqdaa xitaa ama waxyar is dulmaraya bushimaha sare laakiin ma daboolayo, dhererkiisa iyo ballaciisu waa inay u dhigmaan dhinaca guud ee madaxa.
Midabka sanku waa inuu noqdaa midab casaan ama casaan guduudan kaliya. Iftiin casaan / guduud madow / shukulaato ama beer. Cilladaha Qurxinta: Midabbada casaanka, dudley, ama grizzle way dhici doonaan laakiin waxaa loo tixgeliyaa cilladaha is qurxinta. Ma jiro qof diiwaangeliya oo awood u leh / u qalma Midab kasta oo sanka ah oo aan ahayn midabka casaanka casaanka ama casaanka. Oo ay ku jiraan madow, cawl, buluug ama albinism.
The Red-Tiger Bulldog waxay leedahay gabi ahaanba caday dhexdhexaad ah ama waaweyn oo cadaan ah mana aha in la arko marka uu afku xirmayo. Shaashad hoose oo adag (maqas gadaal) ayaa doorbiday. Hoos kadhageyso ilaa ½ inji la aqbali karo (Kayar ayaa kafiican). Dibnaha ayaa si dhexdhexaad ah u qaro weyn leh Midab casaan ama casaan bunni ah oo bushimaha ku daboolaya casaan qafiif ah oo la ogol yahay. Xusuusin: Red-Tiger Bulldogs waa nooc shaqo ah mana aha in lagu ciqaabo ilig jabay ama lumay. Khaladaadka: Ilkaha yaryar. Heerka ama maqaska qaniinyada. U-qalmi la'aanta: Afka baqbaqaaq ama af xidhan oo leh ilko muuqda, Dusha sare ama af qallalan.
Indhaha Red-Tiger Bulldogs waa inay ahaadaan kuwo dhexdhexaad ah iyo yicib ama qaab wareegsan. Waa inay si fiican u dejiyaan dhex dhexaad ah oo si ballaaran loo kala saaro. Midabka indhaha oo qafiif ah waa waajib. Hazel / cagaar / dahab / cawl ama buluug. Haw waa inuusan muuqan. Midab casaan ama casaan-bunni ah oo midab-indho-goobeed ah waa lama huraan in dhammaan midabbada kale ee midabka midab-kala-sooca loo tixgeliyo Ka-reebis / Diiwaangelin Midna Able. Isku-darka isku-darka: Marka labada indhood isku mid noqdaan midab ahaan, Tusaale hal il oo buluug ah iyo isha kale oo dhalaalaysa, ( tan waxaa lagu magacaabaa skittle eyed) waana la oggol yahay oo la doonayaa nooca Red-Tiger Bulldog. Marka labada indhood ay buluug ku yihiin nooca loo yaqaan Red-Tiger Bulldog (kan waxaa loo yaqaan nacnac indhahiisa) waana la oggol yahay oo waa la jeclaan karaa. Cilladaha halista ah waa laga gudbaa ama indhaha aan is lahayn.
Indhaha Red-Tiger Bulldogs waa inay ahaadaan kuwo dhexdhexaad ah iyo yicib ama qaab wareegsan. Waa inay si fiican u dejiyaan dhex dhexaad ah oo si ballaaran loo kala saaro. Midab: midabka indhaha oo qafiifa waa waajib. Hazel / cagaar / dahab / cawl ama buluug.
Dhegaha waa in sare loo taagaa madaxa, cabirkiisuna dhexdhexaad yahay oo la door bidaa. Noocani waa in la jarjaro marka uu ku jiro giraanta bandhiga. Midkoodna ma jaraan ama dhegaha dabiiciga ahi ma muuqdaan. Marka laga reebo marka laga reebo wadamada dalagyada iyo wax soo goynta ay sharci darro yihiin. Bannaanka giraanta showga, way dhici karaan, hoos u dhici karaan, ama u kici karaan markay dabiici yihiin. Ciladaha dhagaha waa dhagaha houndada iyo dhagaha fiidmeerta.
Red-Tiger Bulldog kaliya waxay ku timaadaa maqaarka pheomelanin / amelanistic iyo midabada midabka midabka ee casaanka iyo buniga casaanka ah. Red-Tiger Bulldogs ma soo saaraan muunado leh cirro / buluug ama timo jaakad madow sidoo kale Red-Tiger Bulldogs ma soo saarto maqaarka cawl / buluug ama madow.
Red-Tiger Bulldog waa inuu lahaadaa naqshad jaakad “mantle” ah, ugu yaraan 70% midab ah oo aan ka badnayn 30% cadaan. Midabku waa inuu ahaadaa mid cadaya oo cad oo leh suudh / buste jidh adag oo gogol ah oo ku fidsan jidhka Madaxa qalfoof leh oo afka ku xidhan oo cad cad ayaa la door bidaa, laakiin waa ikhtiyaari Midabka cad ayaa la door bidaa LAAKIIN jabinta kallarka ama midab aan la fileynin A laabta cad waa ikhtiyaari Caddaan cagaha ayaa la door bidaa, cadaan qayb ka mid ah lugta hore iyo lugaha dambe waa la aqbali karaa Calaamadeyn yar oo cadaan ah oo ku jirta guntinta / go'da jirka waa la aqbali karaa. Red-Tiger Bulldog kaliya waxay ku timaadaa midabbo kala duwan oo casaan ama casaan bunni-guduud ah, oo ay ku jiraan, guduud guduud, shukulaatada brindle, gogosha beerka iyo qorfe-brindle. The Red-Tiger Bulldog sidoo kale waxaa loo yaqaanaa inay soo bandhigaan qaab 'mosaic brindle' oo ku dhex jira astaantooda, halkaas oo laba ama in ka badan oo kala duwanaansho ah ay ku dadaalayaan inay isku muujiyaan isla xayawaanka, taas oo keeneysa hal hoos oo gogol ah inuu ku noolaado dharka / bustaha iyo weli hooska kale ee brindle si loo daboolo lugaha gudaha, hoosta hoose iyo daanka. Tijaabooyinka isbeddelka casaanka-brindle ee qaabka jaakada 'mosaic brindle' ayaa ah kuwa aadka loo qiimeeyo.
Qoorta 'RTB', waa inay ahaataa mid ballaaran oo wax dulsaar ah, 'marna' khafiif ah ama xarrago leh. Qoorta RTB aad ayey u dhisan tahay waana inay muujisaa rodol rodol “muuqaalka muuqaalka ee uruurinta xoogga weyn”, qoorta waa inay ahaataa mid aad ugu ballaaran saldhiggeeda, xitaa illaa heer ay u weynaato sida dambe ee occiputka (gadaasha dambe ee madaxa)
Dhabarka ”waa inuu ahaadaa mid aad u adag oo adag hoosta maqaarka waa inuu muujiyaa qeexitaan dhexdhexaad ah oo ballaaran, khadka ugu sarreeya waa inuu ahaadaa mid siman, iyadoo u oggolaaneysa hoos u dhac yar oo u dhow qallajinta marka uu yar yahay. Garan aad u dhexdhexaad ah ayaa la filan karaa laakiin lama dhiirrigelin.
Aagga garabka / cududda sare ee RTB waxaa loo xiraa sida calaamadda sharafta, waayo waa mid ka mid ah sifooyinka ugu caansan uguna waara ee RTB. Garabka RTB, sida suufka NFL gadaal u ordaya ayaa eyga u soo gelaya oo loo marayo khilaafka mucaaradka ee awoodda leh, iyada oo loo adeegsanaayo sidii looga ilaalin lahaa xiriir kasta oo xad-dhaaf ah. Garabku waa inuu had iyo jeer noqdaa mid ka mid ah sifooyinka qeexan / jeexjeexan ee anatomy muruqa RTB. Garabku waa inuu u muuqdaa mid shuruudaysan, oo ballaadhan, waa inuu muujiyaa mid kasta oo ka mid ah saddexda qaybood ee muruqyada murqaha inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa iyo deltoids waa inay u muuqdaan inay yihiin laba xadhig oo dhexdhexaad ah oo caan ah oo ka socda safka ilaa qaybta qallalan iyo qoorta.
Laabta 'RTB' waa inay u muuqataa in lagu faanayo isla markaana ay siineyso aragti ah gaashaan-qaade ama laab-laabti u horseedeysa dagaalka. Markaad fadhidid, muruqyada muruqyadu waa inay hore u soo baxaan iyagoo muujinaya in ku filan heerarka xad-dhaafka ah ee loo yaqaan 'striation' oo ay ku kaceyso muruqyada wareega wareega / iyo murqaha garbaha. Markaad istaagayso isla muruqyada laabta waa inay u muuqdaan kuwo si culus u duuban oo waa in lagu dhejiyaa saxanka naaska / sternum oo kaliya u oggolow meel bannaan oo u muuqata inay yihiin laba jeeb oo yar oo godan oo deggan dhinac dhinac lafta naaska.
Wejiga hore waa inuu u muuqdaa mid si adag muruq u suuxsan. Gacanta hore inkasta oo uusan lahayn muruq weyn, haddana waa inuu muujiyaa qoto dheer oo dhexdhexaad ah iyo kala sooc u dhexeeya kooxaha muruqyada badan ee aaggan. Gacanta hore waa inay ahaataa mid adag. Waa inay ahaataa mid aad u adag taabashada taabashada muruqyada jilicsan marka laga reebo adkaanta lafta. Dhudhunka waa inuu muujiyaa qeexitaanka markuu taagan yahay, markuu fadhiyo waana inuu muujiyaa isku dhac marka lagu jiro dhaqdhaqaaqa.
'Qeybta dambe' waxay ka kooban tahay kooxaha muruqyada ugu qarxa jirka anatomy-ka RTB. Dhamaadka dambe ee anatomy-ka RTB waa mabda’a ay wadato waana inuu si muuqata u muujiyaa neefta qaadashada heerarka tamarta iyo awoodda qarxa. Xubin kasta waa inay noqotaa mid aad u wareegsan gudaha iyo dibaddaba markay taagan tahay. Qeybta dambe waa inay u muuqataa mid dambi leh oo diyaar u ah inay ku qaraxdo ficil. Markaad dhaqaaqdo, rubuca dambe waa inuu muujiyaa dhowr qodob oo qeexitaan ah una muuqda inuu xayawaanka horay ugu sii wado heer aad u daran oo ah xakameyn xakameysan.
RTB waa mid aamin ah oo garasho leh, oo raba inuu guntiga ka xidho sayidkiisa. Kalsoonida noocani ku sido indhaheeda iyo geesinimada fadlan itowcases, waxay u adeegtaa inay ka hortag u noqoto guri / hanti ama hanjabaad shaqsiyeed. Red-Tiger Bulldog marwalba waa u daacad qoyskiisa laakiin waxaa laga yaabaa inaysan soo dhaweyn martida guriga aan la galbin. Waxay ku xukumi karaan oo ku xadgudbi karaan eeyaha iyo xayawaanka qalaad haddii aan la daabicin / lagu dhiirigalin inay sidaa sameeyaan laga bilaabo da 'yar. Waxay wataan ugaarsi xoog leh. Tababbarkii hore ee bulsheed / adeecid ayaa lagula talinayaa in lagu xakameeyo suurtagalnimada gardarrada eeyaha eeyaha iyo cayayaanka yaryar sida xayawaanka. Waxay si fiican ula wadaagaan eeyaha iyo xayawaanka la yaqaan. Red-Tiger Bulldog wuxuu u baahan yahay milkiile adag, isdaba-joog ah oo kalsooni leh. Tarankaani waa mid caqli badan oo jecel inuu raalli geliyo, haddana wuu adkaan karaa oo wuxuu riixi karaa waqtiga ciyaarta inta lagu jiro tababarka. Socodka degdega ah ama nasashada ciyaarta gaaban kahor kulamada tababarka waxay u egtahay inay gubto tamar ku filan oo looga hortago arrintan. Saxitaanka khafiifka ah iyo qadarka badan ee amaanta afka ah waxay u muuqdaan inay soo saaraan jawaab wanaagsan. Cilad jireed oo xad dhaaf ah ama xukun wuxuu sameyn karaa dhaawac jireed. Red-Tiger Bulldogs waxay leeyihiin xusuus weyn waxayna si dhakhso leh u hayaan casharada. Waa lagama maarmaan in Red-Tiger Bulldog ay fahamsan tahay in xubnaha xirmooyinka aadanaha ay dhammaantood ka sarreeyaan iyaga nidaamka baakadka. Red-Tiger Bulldog waa mid shaqadiisa ka muuqato oo dabacsan, jilicsan oo adeeca carruurta. Way ka fogaan karaan shisheeyaha aan la shaacin sida ay u muujinayaan awoodooda ilaalin, laakiin way is dejin doonaan iyagoo hubinaya sayidkooda. Red-Tiger Bulldogs waxay aad u ilaalinayaan milkiilayaashooda iyo milkiilaha milkiilahooda waxayna daacad u noqon doonaan iyaga, xitaa waxay bixinayaan naftooda.
Dhererka: 22 - 26 inji (56 - 66 cm)
Miisaanka: 75 - 110 rodol (34 - 50 cm)
Red-Tiger Bulldog wuxuu ubaahan yahay cunug cunug cunno cuno liita inta lagu gudajiro sanadka koowaad ee koritaanka, qaababka quudinta aan caadiga aheyn, xad dhaafka, ama la'aanta nafaqada eeyaha waxay sababi kartaa hoos udhigida buugaagta iyo kuusoo dhawaanshaha hore.
Red-Tiger Bulldog waxay ku fiicnaan doontaa guri dabaq ah haddii si ku filan loo jimicsado. Iyagu gudaha waxoogaa kama hawlgalaan waxayna ku fiicnaan doonaan ugu yaraan deyr dhexdhexaad ah.
Red-Tiger Bulldog waa in lagu qaataa a socod dheer oo maalinle ah. Noocani wuxuu ku fiicanyahay magaalada iyo meelaha miyiga ah, waqtiga ciyaarta caadiga ah sida jimicsiga ama socodka qunyar socodka ah waa lama huraan. Waxay yihiin eeyo dhexdhexaad ah oo firfircoon waxayna jecel yihiin inay yeeshaan marin jidheed. RTB waa nooc 'adkaysi hibo leh', oo lagu soo saaray qaab dhismeed caato ah oo ka caansan marka loo eego eyda badan ee dhaxalka bulldog. Waxay yihiin qarxiyayaal, dhaqso iyo dhaqso badan, u baahan dhiirrigelin maskaxeed iyo waliba mid jireed.
Qiyaastii 12 - 16 sano
Qiyaastii 6 eeyo
Koodhka gaaban, ee adag waa sahlan tahay in la xajiyo. Shanlo oo ku caday burush adag, oo maydh markii loo baahdo oo keliya. Noocani waa celcelis daadiya. Red-Tiger Bulldogs oo ah nooc jilicsan oo dahaaran oo keliya ayaa u baahan qurxinta ugu yar, cadayashada joogtada ah iyo maydhashada sida loogu baahan yahay ayaa ka dhigaysa inay muujiyaan inay u qalmaan. Socodka caadiga ahi wuxuu cidiyihiisa ku hayn doonaa dherer caafimaad qaba.
Red-Tiger Bulldog waxaa abuuray Rev. Scott L. Amos, Sr. iyo wiilkiisa, Scott Amos II bartamaha gobolka Indiana ee Mareykanka, laga bilaabo 1991. Red-Tiger Bulldog waxaa laga soo saaray aasaaska casaanka -gartay Bulldogs Mareykan ah waxaa iska leh oo soo saaray Rev. Scott L. Amos, oo sidoo kale loo yaqaan 'Scott Free' iyo barnaamijkiisii ​​taranka ee markaas ee 'Amos American Bulldogs' iyo 'Free-Style American Bulldogs'. The Red-Tiger Bulldog's Breed, Registry Bred and Archive waxay heleen diiwaangelinta mabda'a dowladda (Serial # 85002578) oo ay la socoto Patent-ka Mareykanka iyo Xafiiska Ganacsiga ee Janaayo 1, 2011 oo ah 'The Red-Nosed First (Breed) ee Bulldog taariikhda aduunka'. Inkasta oo inta badan bulldog kale ay muujiyaan raadadka tijaabooyinka sanka-cas ee sida astaamaha aan aadka looga jeclayn ee ka dhex jira heerka ay ku nool yihiin ee madow ee sanka. The Amos’s waxay soo saareen Red-Tiger Bulldog si ay u soo saaraan si gaar ah eeyaha maqaarka pheomelanin / amelanistic iyo midabada jaakad ah ee casaanka ama casaanka casaanka ah ee qaabka gogosha. Ereyga 'Tiger' ee ku jira magaca abuurka waxaa laga soo dheegtay shabeelka loo yaqaan 'brindle shaig' sida wax ku tusaya qaabka jaakadda Red-Tigers. Qaybta 'Casaanka' ee magaca taranka ayaa ah mid tilmaamaysa maqaarka midabka casaanka ah ama casaanka ah iyo midabka jaakadda ah, halka erayga 'Bulldog' magacooda lagu tilmaamayo dhaxalka hiddo-wadaha hidde ahaan.
Dabayaaqadii 90-aadkii Rev. Amos wuxuu siiyay Ca de Bou - Mallorquin bulldogs , Banter Bulldog oo saafi ah Old Caddaan Cad Bulldog genetics for out-cross vigor Faleebadaan isku dhafan waxay u ogolaatay culeyska Red-Tiger Bulldog inuu gaaro heerar sare oo caafimaad, qaab dhismeed la safeeyey (oo u oggolaanaya adkeysi kor u kac ah), iyo madax cephalic badan, Jaw iyo habka neefsashada (oo u oggolaatay neefsasho nadiif ah), halkii habdhiska neefsashada ee taariikh ahaan liita ee ku jira noocyo kale oo badan oo bulldog ah, oo ka soo jeeda daanka brachycephalic ee caadiga ah iyo neefsashada ee bulldogs guud ahaan laga aasaasay.
Bartamihii 2000's The Amos wuxuu kudaray Levitt-isku dhafan Bulldog dhiig iyo bulldog dhiig isku dhafan oo ka yimid koonfurta Mareykanka, sida Talladega, Huntsville, Birmingham, Alabama iyo hal Bulldog / Boxer Strain oo ay si gaar ah u soo saareen Hobbyist breed Mr. iyo Mrs. Kendrick Swain ee Atlanta GA… si loo ballaariyo mowqifka abtirsiinta abtirsiinyada RTB.
In kasta oo, isbeddelka lama-huraanka ah uu dhow yahay, Aasaaskii iyo abuurkii kobcitaan ee Tarankaani waa la dhaafay oo RTB hadda waa xaqiiqo qurux badan oo ku qotonta Taariikhda iyo kaydka Ameerika.
RTBRA = Diiwaanka Bulldog ee Casaanka-TiGer
Red-Tiger Kennels Red 'Faygo' eeyaha yar-yar ee Red-Tiger Bulldog oo jira 4 bilood jir— 'RTK's Red' Faygo 'waxaa soo saaray Scott Amos, II oo ku yaal Bartamaha Indiana. Hadda wuxuu la deggan yahay Waqooyiga Indiana qoyska Sanford. 'Faygo' waxaa loo arkaa inay tahay rajo soo bixid xoog leh waana la qadarinayaa sababtoo ah dhif iyo naadir, casaan-qorfe guduud guduud midabkiisa / qaabkiisa iyo nooca madaxa ee ragga. '
Red-Tiger Kennels Red 'Faygo' eeyaha yar-yar ee Red-Tiger Bulldog markay jiraan 4 bilood
Red-Tiger Bulldog eey oo leh milkiilihiisa faraxsan, Lahaanshaha Scott L. Amos, Sr.
Red-Tiger Bulldog oo leh milkiilkiisa faraxsan, Lahaanshaha Scott L. Amos, Sr.
Red-Tiger Bulldogs, Lahaanshaha Matt Galvan Red-Tiger Bulldog Breeder Detroit Michigan
Red Tiger Bulldog Pups, Lahaanshaha Red-Tiger Kennels
Red Tiger Bulldog Puppy, Lahaanshaha Red-Tiger Kennels
Red-Tiger Bulldog Sawirada 1
god madow iyo caddaan
meeqa ayay le'eg yihiin miisaanka loo yaqaan 'Poodles'
muxuu u eg yahay eeyga loo yaqaan 'chow chow choy'
isbaanish khafiif ah oo lagu qaso shih tzu
boston terrier english bulldog mix puppy ee iib ah